Ngelishwa, abanye abafazi baneengxaki ezinjalo xa engathandanga ngesondo. I-Frigidity yimeko yokubanda kwabasetyhini, ukungakwazi ukuvakalelwa yindoda, ukukhwabanisa ngokwesondo, ukuvusa kunye ne-orgasm. Ukunyangwa kobungcipheko kwabasetyhini ngexesha lethu kusebenza kakhulu.
Ngaphambi kokuqala unyango, kuyimfuneko ukuchonga isizathu esabangela ukucoca. Akunqabile ukuba abafazi baxoxe ngesifo sengqondo ngesimo esinjalo abantu abangakwazi ukuwanelisa. Ngelo xesha, umfazi "ucebile" ulindile izenzo zendoda, ethatha isikhundla esinqabileyo. Malunga naluphi na uhlobo oluthile olufanele ukuthetha, ukuba umfazi ungakwazi ukuzimela ngokuzimela. Kodwa kule nto okanye kwimeko enjalo kuyimfuneko ukuchonga imbangela yokungahambi kakuhle kwemvelo. Unyango lwengqungquthela ludibaniswa ngenxa yale nto ngengqondo yengqondo.
Bonke abafazi abavakalelwa ukunganeliseki ngobomi besondo kufuneka bahlolwe yi-psychoanalyst-sexologist. Ngamanye amaxesha kunokwenzeka ukutshintsha ubomi bakho besondo emva kweeseshoni ezininzi zomsebenzi wengcali.
I-Frigidity iphathwa njengeyiphi isifo. Xa isi sifo singahambelani nokungaqhelekanga kokuphuhliswayo (umzimba) okanye iimvumba, ngoko ukucocwa kungakhupha umfazi. Kuphela nje ukuba le ntokazi kufuneka ifune ukufumana umdla kunye ne-orgasm. Kubalulekile ukuba abonise isinyathelo, ukumanga nokumkhathaza iqabane lakhe ukuze aphumelele umnqweno onamandla kuye. Ezinye iingcebiso ukwenzela ukuba zilahle iingxaki zobungcipheko kwabasetyhini: ukulala ngesondo kangangoko kunokwenzeka; Kanye kunye neqabane liyimfuneko ukuxoxa ngeengxaki kwaye ufune izisombululo.
Kubalulekile ukuba ulwalamano lwezesondo luvela kwindawo yokuzola. Amakhandlela, iglasi yewayini, iintyatyambo, umculo omninzi, ngamanye amazwi, kufuneka kube nomoya ohambelana nesithandane nomoya wesifiso. Indoda enothando, ukuba ufuna ukukunceda ukukrazula ingxaki kumfazi, iya kumnceda, amkhathaze kwaye athethe amazwi athile, kuba oku kunceda ukwandisa umnqweno. Abafazi abaninzi banamahloni ngenxa yeminqweno yabo, ngoko umntu kufuneka aziqagele, enze ngokucophelela nangengqiqo.
Ngokwalo, i-orgasm inceda kakhulu kwimpilo. Xa umfazi esoloko efumana i-orgasm, umngcipheko weenkqubo ezivuthayo kunye nokwakhiwa kwezicuba kunciphisa. I-Orgasm ivimbela ukubunjwa kwezinto ezincinci ezinobungozi kwizitho, zikhuthaza ukuphumula (imisipha). Kwakhona, i-orgasm inceda ukubuyisela izinga lentliziyo, ukulungelelanisa i-pulse, uxinzelelo lwegazi, unempembelelo kunye nokuphumla. Ukunyangwa kwabasetyhini njengaleyo sifo njengobuncitshisi kubalulekile, kuba i-orgasm iyakukhusela izifo ezininzi zezilwanyana.
Iziyobisi ukwenzela unyango lobungcipheko kubasetyhini
Ukuphakamisa unyango lwabasetyhini besi sifo kunokwodwa ugqirha, ngokusekelwe kwimimiselo yabasetyhini kunye nezizathu zokugula kwakhe. Ukunyangwa kobungcipheko yindlela yokwelapha yinto encedisayo. Yibanjelwe kuphela ngokubambisana nezinye iindibano ezahlukahlukeneyo. Akukho zidakamizwa ezithile kwixesha lethu ezingenza ukuba ibhinqa livuke ngokwesondo. Kodwa ukwandisa umnqweno wesini, oogqirha bancoma ezinye iziyobisi. I-Tribestan ne-Tribulustan zibonakalise kakuhle. Ezi zi yobisi ziyisithintelo esihle kwiimfuno ze-hormonal kunye nezifo zabasetyhini, kwaye azinayo imiphumo ebalulekileyo. Kwaye kunye nakwii-pharmacy zithengiswa ngeentlobo ezahlukeneyo zokunxila kunye noveliso, eziphinda zinconywe ngugqirha. Oku kutywala okwenziwe ngotywala ephuma kwi-ginseng, i-extract of spirits from anterpers, i-Eleutherococcus, i-extraction ye-alcohol kunye ne-marigold. Kwaye kunye namaqabunga owomileyo, iintyatyambo kunye neziqu ze-violets, i-tincture yeengcambu zegolide.
Isiphumo esihle kakhulu kunyango lwe-frigidity ifunyenwe ngoncedo lwe-physiotherapy: ukunkcenkceshela ngezisombululo zonyango lwe-perineum, i-diathermy, ibhafu emanzini olwandle kunye nezicelo ezinomdaka okhethekileyo wokunyanga.
Kodwa okubaluleke kakhulu, ukukhupha ukucoca, inkosikazi kufuneka ifune yona, ngoko umphumo uya kuba nethuba.
Iiyure ezimbini zokuzonwabisa kwiphepha elimhlophe
Ukwabelana ngesondo kuyimfuneko yomntu
Iingcamango malunga nobuchule bezesondo zabantu
Ukuthokoza ngokusesikweni kwi-Annunciation. Ukuthintela iindinyana ukuvuyisana ngomthendeleko we-Annunciation. I-SMS emfutshane iyavuyisana no-Annunciation
Iipancakes kunye nekhekro nut nut
Ziziphi izimonyo zokuzikhethela intombi yakho
I-Cupcake nge-vanilla nekhadiyamom
Ubusana obuselula kwimantombazana